Okokuzithokozisa kwe-Airbnb kuzovulwa kabusha nini futhi kuphi? - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Ukuze uthole izindlela zokukhansela nezokubuyiselwa imali ongakhetha kuzo, khetha ukubhukha ekhasini Lohambo. Umthetho wethu wezimo ezingalindelekile usebenza kuphela ekubhukheni okuthile. Uma usuku lwakho lokungena lungemva kuka-September 15, phinda uhlole lapha ngo-August 15, 2020 ukuze uthole ezakamuva.
Okokuzithokozisa kwe-Airbnb kuzovulwa kabusha nini futhi kuphi?
Imigomo yokuhoxisa imali yokuvula kabusha Okokuzithokozisa kwe-Airbnb
Yiziphi iziqondiso zezempilo nezokuphepha zezivakashi zokokuzithokozisa ezifundeni esezivulwe kabusha?